अण्डा शाकाहारी कि मांशाहारी ? वैज्ञानिकले निकाले यस्तो निष्कर्ष – Palpapati
Home > रैनादेवी > अण्डा शाकाहारी कि मांशाहारी ? वैज्ञानिकले निकाले यस्तो निष्कर्ष
January 4, 2019 Bishnu574
पाल्पा–अण्डालाई मांशाहारी खानेकुरा नमान्ने मानिसहरु पनि दुनियाँमा धेरै छन् । अर्थात् कतिपय आफुलाई शाकाहारी भन्नेहरुले पनि अण्डा खाने गर्दछन् ।आखिर अण्डा शाकाहारी हो कि मांशाहारी रु यस विषयमा मानिसहरुले लामो समयदेखि नै बहस गर्दै आएका छन् । तर वैज्ञानिकहरुले यस्तो तथ्य पत्ता लगाएका छन् कि जसले अण्डा मांशाहारी कि शाकाहारी भन्ने बहसलाई अब अन्त्य गरिदिनेछ ।
बजारमा पाइने धेरै अण्डाहरु बतासे, अर्थात् गर्भाधान नभएका अण्डा हुन् । अर्थात् यी अण्डाबाट चल्ला कोरलिँदैन । यसको अर्थ त्यस्ता अण्डाहरु विज्ञानको नजरमा शाकाहारी हुन् ।अण्डामा तिनवटा प्रष्ट तह हुन्छन् । पहिलो बाहिरी बोक्रा, दोश्रो सेतो भाग र तेश्रो पहेँलो भाग ।सेतो भाग प्रोटिनको निकै उत्कृष्ट श्रोत हो । त्यसमा प्राणीको कुनै हिस्सा नहुने भएकाले अण्डाको त्यो भाग पूर्णरुपमा शाकाहारी हो ।
पहेँलो भागको कुरा गर्दा त्यसमा प्रोटिनसँगै कोलेस्ट्रोल र फ्याट पनि पाइन्छ । जब कुनैपनि अण्डा पोथीमा भाले लागेर पारिएको वा गर्भाधान भएको हुन्छ तबमात्र त्यो अण्डा मांशाहारी बन्दछ । अन्यथा अण्डाको पहेँलो भागपनि शाकाहारी नै हुन्छ ।अतः अण्डाका पारखीहरु अब ढुक्क भए हुन्छ । तपाइँ शाकाहारी हुनुहुन्छ भनेपनि तपाइँले नकोरेलिने बतासे अण्डा खान सक्नुहुन्छ । किनकि बतासे अण्डा शाकाहारी नै हुन्छ ।
कार्यपालिका सदस्यहरुको सेवा सुविधा दोब्बर
रिब्दीकोट गाउपालिकाको चौथो गाउँसभा सूरु